Akoho Yassa, Alloco na Mafé: Andramo ireo Nahandro Mafilotra Afrikana Araka Ny Hitan’ireo any Ampielezana Ao Paris · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Mey 2017 4:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, 日本語, Português, Italiano, Français
Ny Waly-Fay dia endrik'i Senegaly, firenen'ny « teranga » (tia mandray vahiny). Mafana ny fiarahana ary mahita karazana sakafo mahazatra an'i Afrika Andrefana ianao: accra, mafé, thiep, yassa, n'dole, sns. Mitantara ilay bilaogera Dje S, teratany Senegaly:
Natsangan'i Alexandre sy Vicky Bella Ola 15 taona lasa izay ny trano fisakafoanana Rio dos Camaraos mba hanasongadinana ny nahandro nentim-paharazan'ny Afrikana mainty. Manazava i Alexandre:
Ny Ndolé no nahandro Kameroney tsara indrindra ao Rios. manazava ny antony ankafizany izany toerana izany i Mi Cbou avy ao Yaoundé :
Nahita ny mampiavaka ny tsiron'ny nahandro Afrikana efa nandramana tao Cote d'Ivoire sy Senegal aho, tamin'ny sakafo isan-karazany. Fanampin'izany ny fandraisana mafana atolotr'ireo tompon-toerana. Tena tsara ny Ndolé, aroso miaraka amin'ny akondrolahy nendasina.
Naorina tamin'ny 1 Febroary 2012 ny African Kitchen Paris. Toeram-pisakafoanana Lounge FrankôNizeriana ao afovoan'i Paris. Zara raha omem-boninahitra ny nahandro Nizeriana ka te hanitsy izany fanadinoina izany ity trano fisakafoanana ity. Tsy nahay momba ny nahandro Nizeriana i Sylvie saingy nahita izany tamim-pifaliana;
Tsy tahaka ireo toerana teo aloha, tsy trano fisakafoanana sakafo maivana ahitana an'i Mama Bintou mandray am-pitsikiana ny Snack de Bamako. Ao no ankafizana ny sakafo nentim-paharazan'i Mali sy ny Afrika Andrefana rehetra amin'ny vidiny antonony: Mafé, Tieb, Yassa, brika, akoho atono sy Alloco.
5 minitra an-tongotra miala ao amin'ny Porte d'Orléans, manome voninahitra ny biby kely manana maso talanjona sy fetsifetsy ity trano fisakafoanana kely ity, firavaky ny biby Malagasy ary koa nahandro ao amin'ity nosy ity, tsy dia hita firy ao Paris [ny nahandro malagasy]. Nankafy izany Peggy D:
Elodie Rabenja, teratany Malagasy nankasitraka: